Culumo Soomaaliyeed oo cambaareeyey wargeyska Faransiiska ah ee Charlie Hebdo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Culumo Soomaaliyeed oo cambaareeyey wargeyska Faransiiska ah ee Charlie Hebdo
Mareeg.com: Dallada Culumada Soomaaliyeed ayaa ca,baareeyey sawirro cusub oo uu soo saaray Wargeyska dalka Faransiiska ka soo baxa ee Charlie Hebdo.
Guddoomiyaha hay’adda culumada Soomaaliyeed, Sh. Bashiir Axmed Salaad oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay katoonno lagu afla-gaadeeyay Nebigeenna Muxamed (NNKH) oo ay warbaahinta reer galbeedku daabaceen gaar ahaan wargeyska dhawaan lagu weeraray magaalada Paris ee xarunta dalka Farasiinka ee Charlie Hebdo.
Wargeyska Charlie Hebdo ee daabaca waxyaabaha maadeyska ah oo sawir lagu muujiyo ayaa todobaadkii hore la weeraray waxaana la dilay 10 ka mid ah shaqaalihiisa oo Tifatirhiisii ka mid ahaa iyo sidoo kale 2 boolis ah.
Sababta loo weeraray wargeyskaas ayaa aheyd isagoo horay u daabacay muuwaalo lagu Nebigeenna Muxamed (NNKH), wuxuuna hataan soo daabacay sawiiro kale oo Muslimiinta ka careysiiyey.
Wargeyska Charlie Hebdo oo dhaqaale xumo heystay lagana daabici jiray ilaa 60 kun oo nuql ayaa markii la weeraray kadib laga daabacay 3 Miylan oo nuqul oo waqti koobana la gatay, waxaana maamulkiisu sheegay iney gaariinayaan ilaa 5 Milyan nuqul!
Al-Qaacidada Jaziiratul Carab ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday xarunta Wargeyska Charlie Hebdo ee ku yaala magaalada Paris, halkaasoo labo nin oo walaalo ah ay ku dileen ilaa 12-ruux.
Muuqaal ay barta Youtube soo dhigeen Al-Qaacidada Jaziiratul Carab oo uu ka soo muuqday sarkaal sare oo lagu magacaabo Naasir Al-Ansi ayaa sheegay in weerarka ay labada walaalaha fuliyeen ay iyaga ka dambeeyeen, isagoo xusay inay u bartilmaameedsanayeen wargeyskaas aflagaadada uu u geystay Nabi Muxamed (NNKH).
Waxaa uu ku goodiyay in weeraro dheeraad ah ka fulinayaan Faransiiska, isagoo ku eedeeyay in Faransiiska qeyb ka yahay dagaalka ka dhanka ah islaamka.
Sarkaalkan ayaa ku tilmaamay labada walaalaha ee fuliyay weerarkaas Cherif Kouachi iyo Said Kouachi geesiyaal.
Labada walaalaha ee fuliyey weerarkaas waxaa muddo 3 maalmood ah oo lagu dabajiray kadib dilay ciidamada dalka Faransiiska.
Kenya oo hoos u dhigii ugu badnaa ku sameysay qiimaha shidaalka muddo 4 sano ah